Warshada Slewing Drive - China Slewing Drive Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Guryo xiran oo nooca culus ah oo loo yaqaan Dual Worm gear Slewing Drive WEA25-2
Iibinta Hot Stock Welding Positioner Machine SE12 Slewing drive
Dhammaan moodooyinka wax lagu dilo waxaan ku haynaa kayd si degdeg ah looga keeno SE3 ~ SE25
Iibka Spot!!!2021 Shiinuhu Shiinuhu wuxuu dilay darawalka qiimaha ugu fiican isagoo dilay SE7
Waa maxay faa'iidada saamileyda ah ee Wanda Slewing Bearing Co.,Ltd.waa soo-saare xirfad leh oo dhoofiya wax-ku-dhufashada / giraanta wax lagu dilo / goobada wax lagu dilo iyo darawallada wax lagu dilo, kuwaas oo inta badan lagu dabaqo mashiinnada dekedda, mashiinnada macdanta, mashiinnada alxanka, baabuurta dhismaha, baabuurta moodada ah, nidaamyada raadraaca qoraxda ee hal ama laba geesoodka ah, iyo nidaamyada tamarta dabaysha yaryar iwm.
3. Guryeynta kuxiran ee wax lagu dilo
Kaydka Cabbirka Yar ee Wadista Wadista Qalabka Automation-ka
1. Xajmiga yar ee Slewing Drive oo kayd ah
2. Miisaan fudud oo Wadista
3. Precision Slewing Drive oo xanbaarsan
XZWD Stock Slewing Drive Gear Gear Drive oo leh wakhti gaaban oo dhalmo ah
Xuzhou Wanda Slewing Ring Co., Ltd., oo ah soo saaraha ugu horreeya ee Shiinaha ee wax lagu dilo iyo darawallada wax lagu dilo, wuxuu isku daraa naqshadeynta, wax soo saarka, cilmi-baarista iyo horumarinta, iyo iibinta.
Waxay leedahay awood farsamo oo xoog leh, awood wax soo saar oo xooggan iyo qalab tijaabo ah oo dhamaystiran.
Si aan ula jaanqaadno suuqa, shirkadeena waxa ay samaysay laba warshadood oo wax-soo-saar ah, waxaanay ku kordhisay qalab wax-soo-saar.Waqtigan xaadirka ah, dhammaan moodooyinka wadista rotary ayaa ku jira kayd waana noqon karaan
lagu soo raray todoba maalmood gudahood.
Slewing Drive SE12 in Stock For Solar Tracking |XZWD
1.Slewing drive asal ahaan loo qaybin karaa hal dixiri drive slewing drive, double dixiri drive slewing drive iyo nooca gaarka ah ee slewing drive.
2.Slewing Drive waa sahlan tahay in la isku keeno, lagu ilaaliyo, oo la badbaadiyo booska
3.Slewing drive waxay yarayn kartaa kharashka
1. Guryeynta kuxiran ee wax lagu dilo heerka saxda ah ee IP65.
2. Wadista wax lagu dhufto waxay la mid noqon kartaa matoorrada kala duwan (AC, DC, Hydraulic)
3. Waxaan leenahay SE Series, WEA Taxanaha, Single dirxi iyo Dual dirxi.
4.OEM waa la heli karaa
XZWD Dabagalka Qorraxda ee kuxiran Guryaha SE7 Slewing Drive
1. Guryeynta laxiran waxay inta badan khuseysaa xaalada aad u saraysa ee looga baahan yahay boodhka celinaya, roobka iyo munaasabada ka hortagga daxalka.
2. Slewing Drive Presion fasalka IP65
3. Dariiqa wax lagu liqo oo inta badan loo isticmaalo mishiinada dekedaha, mashiinada macdanta, alxanka, ilaalinta cadceeda iyo wixii la mid ah.
4. Slewing drive waxay leeyihiin taxane SE iyo WEA.
5. Waxaan samayn karnaa isbeddel ama naqshadeyn karnaa moodallo cusub macaamiisha
Dixiri labalaab ah oo loogu talagalay baaldi qodista